चेक बाउन्स-४ : मोडल खुस्बुलाई ३ महिना कैद फैसला फैसलाप्रति के भन्छिन् खुस्बु?
नारायण अधिकारी मंगलबार, जेठ ७, २०७६, १५:५५
काठमाडौं– सप्तरीको राजविराज-८ का ४३ वर्षीय गोपाल कटुवाल र मोडल तथा समाजसेवी खुस्बु ओलीबीच एकताका राम्रै सम्बन्ध थियो।
बेला-बेलामा उनीहरुबीच रकम लेनदेन समेत हुने गरेको थियो। सोही क्रममा झन्डै २ वर्षअघि मोडल ओलीले कटुवाललाई आफूले घरजग्गा किन्न लागेको र त्यसका लागि रकम अपुग भएको भन्दै सापट मागिन्। कटुवालले ओलीलाई ३६ लाख रुपैयाँ दिए।
ओलीले उक्त रकमको सावाँ-ब्याजसहित फिर्ता गर्ने बाचा कटुवाललाई गरेकी थिइन्। पछि कटुवालले आफूले दिएको सापट रकम मागेपछि ओलीले कुमारी बैंक न्युरोड शाखाको ३६ लाख रुपैयाँको चेक दिइन्। खुस्बु ओली नाममा रहेको खाता नम्बर ०५०९५२४१६१२२६०१५ को चेक नम्बर ०००५४६२५८३१६०१ मार्फत उनले ३६ लाख रुपैयाँको चेक काटेकी थिइन्। उक्त चेक २०१७ जनवरी ३ तारिखमा काटेको देखिन्छ। त्यसको दुई दिनपछि कटुवाल चेक साट्न कुमारी बैंक पुगेका थिए। तर, बैंकले रकम नभएको भन्दै उनलाई फर्काइदियो।
पछि पटकपटक फोन गरेर पैसा जम्मा गर्न भन्दा पनि ओलीले रकम जम्मा नगरेको कटुवालको भनाइ छ। त्यसपछि कटुवाल २०१७ जनवरी १९ तारिखमा पुन: चेक साट्न बैंक पुगे। बैंकले पहिलेकै रेडिमेड जवाफ फर्कायो, ‘ओलीको खातामा पर्याप्त रकम छैन।’
तर ओलीले अदालतले यसबारे आफूलाई सूचना नदिएको दाबी गरेकी छन्। 'मैले यसबारे कोर्टबाट एउटा लेटर पनि पाएको छैन। म्यादका लागि पनि बोलाएको जानकारी छैन,' उनले भनिन्, 'कुमारी बैंकसँग पहिले नै कटआउट भएर मैले पत्र पनि पाइसकेको छु।' भोलि आफै अदालत गएर बाँकी प्रक्रिया चाल्ने उनको भनाइ छ।
को हुन् खुस्बु?
नेपालका सडक बालबालिकाले रूसको मस्कोमा भएको स्ट्रिट चाइल्ड विश्वकपमा समेत उनकै पहलमा भाग लिने अवसर पाएका थिए। खुस्बुले 'रिह्याबिलिटेसन अफ स्ट्रिट चिल्ड्रेन बिफोर एन्ड आफ्टर' नामक डकुमेन्ट्री पनि बनाएकी छन्।